Home News Jibuuti oo si Cara leh ugu Gacan seyrtay inay isku soo Dhawaadaan...
Jibuuti oo si Cara leh ugu Gacan seyrtay inay isku soo Dhawaadaan Eretria ama Cunaqabateynta laga Qaado
Wakiilka qaramada midoobay u fadhiya jibuui oo ka halyey shirkii golaha amaanka ayaa eedeyn kulul dusha uga tuuray Eretria isagoo sheegay inay tahay dal xumaan badan ka wada xadka u dhaxeeya labada dal.
Kadib markii ay dalka Qatar oo labada dal xadkooda ciidamo dhexdhigtay ay kal hore kala baxday ciidankeeda waxaa halkaas ka muuqatay in Qatariyintu ay u shokhfal duleeliyeen Eretriyiin oo isla markiiba la wareegtay dhulkii ay isku haysteen labada dal.
Dad badan ayaa aaminsanaa inay si degdeg ah wax uga badali doonto xiriirka Itoobiya iyo Eritriya oo soo hagaagay xirirkan murugsan ee u dhaxeeya Eriteriya iyo Jibuuti. Labada dal 2008 ayey ku dagaaleen meesha la yiraahdo Ras Doumeiraoo ay Eriteriya soo weerartay kuna dishay 8 askari oo ka tirsan ciidanka Jibuuti ilaa haddana xal lagama gaarin degaankaas. Erateriya waxay horay u weerartay dhul badeeyo ay Yaman leedahay oo badda cas ku yaalla. Dhinaca kale Erateriya waxay taageertaa kooxaha aan gudaha dalalkooda si nabadeed siyaasiyan uga halgami Karin balsa raba inay mansab siyaasadeed ku gaaraan qori iyo dhiig daadin sida Shabaab iwm.
Danjiraha qaramada midoobay u fadhiya Jibuuti waxaa uu golaha amaanka ee qaramada midoobay u sheegay inay Ertriya dhegaha ka fureysatay dhammaan qaraarradii golaha amaanka, taas oo ka soo qaadday waxba kama jiraan. Waxaanu sheegay inay Jibuuti ka xun tahay Erateriya oo diiday inay qaabisho madaxa guddiga cunaqabateytanta Golaha Ammaanka oo booqasho shaqo ku tagay gobolka, soona booqday dhammaan waddama geeska Afrika marka laga reebo Erateriya oo diiday inuu dalkeeda yimaado.
Haddaba waxaa iska cad warar beryahan sheegayey inuu Asmara tagi doono Madaxweyne Ismaciil Cumaar Geelle inaysan wax badan ka jiri Karin oo laba dalka oo heerkaas xaalkoodu kala joogo madaxdoodu inay is boqataa waa aadag tahay, balsa wali waa siyaasad oo saacado ayey isku badashaa saadaashasa ma muuqato hadda.
Waxaasa debinka ku dhacay MW Farmajo oo uu Isias Afawerki ka saxeexday inuu iyo dalkiisa oo uu shabaab ku shido raalli ka yihiin in Erateriya laga qaado cunaqbateynta iyadoo haysataa wali dhul ay dad Somaliyeed –Walaalaha Jibuuti leeyihiin, taageerada shabaabna aanba la soo hadalqaadin. MW Farmajo oo mar waliba ku hawlgala siyaasad Hawtul Hamag ah waxaa uu hadda leeyahay waxaa I khalday Zakariya Xaji Maxamuud iyo Maxamud Axmed Tarzan. Haddaba haddiiba aad kuwaas la tashatay oo ay gadaal kuu fadhiyaan Jamaal, iyo Cabdisicid, kheyrana R/Wasaare kuu yahay waa laguu yabaa!!!!.
Previous articleMaamulka Gobolka Banaadir oo gabay Howshii ugu Muhiimsaneed Ee Looga Baahnaa(Aqriso)
Next articleSheekadaan Kala wareeg oo Laba shacb ah oo reer Muqdisho dhibaateysan Dhexmartay:
Dhalinyaradii Baraha Bulshada u Qaabilsaneed Kheeyre oo Xilal kala Duwan looga...
C/raxmaan C/shakuur” Dalku Wuxu Halis Ugu Jira Kali Talisnimo Hadi Musharaxa...